Sawir: Trump oo isagoo murugo madaxa la raaricinaya dib ugu laabtay aqalka cad.
Sunday November 08, 2020 - 10:00:32 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa markii looga adkaaday doorashooyinkii madaxtinimada wuxuu muujiyay sida uu uga murugeysanyahay guuldarrada gaartay.
Donald Trump ayaa shalay gelinkii dambe dib ugu laabtay aqalka cad kadib markii uu kasoo laabtay ciyaarta loo yaqaan Golfka.
Sawirro lagasoo qaaday goobta ayaa muujinayay Trump oo isaguu madaxa raaricinaya sii gelaya albaaba weyn ee darbiga aqalka cad "madaxweynuhu wuxuu ahaa mid aad uniyad jabsan oo madaxa raaricinaya markii uu dib ugu laabanayay aqalka cad" sidaas waxaa yiri wariye katirsan shabakadda CNN.
Dad taageersan xisbiga Dimuquraadiga ayaa ku buuqay oo wadada ugalay kolonyadii gaadiidka ee gelbinaysay madaxweynaha Mareykanka ee aan wali xilka wareejin.
Qoraal kooban oo Trump uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in isagu uu guulaystay wuxuuna diiday in uu qiro guusha uu doorashooyinka ka gaaray Joe Biden musharaxa xisbiga Dimuquraadiga ah.
Ilo wareedyo ayaa usheegay warbaahinta ugu afka dheer dalka Mareykanka iyo lataliyaasha Trump ay usoo jeediyeen in uu aqbalo guuldarrada soo gaartay si looga fogaado fatqalado siyaasadeed oo wadanka ka oogma.
Weerar Askar lagu dilay hubna lagu qabsaday oo ka dhacay duleedka Balcad.
Twitter oo xiray ciwaankii Trump iyo Koongareeska oo baaq jeediyay.
Askar iyo Saraakiil ku dhintay qaraxyo ka dhacay degmada Balcad.
Donald Trump oo sheegay in sedax isbuuc kadib uu dib ugu laaban doono Aqalka Cad!
Donald Trump oo ogolaaday in uu xilka ku wareejiyo Joe Biden.
Donald Trump oo Eryay Wasiirkiisi Difaaca iyo Carona oo aqalka cad ku dhax faafay.
Joe Biden oo noqday madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka iyo Trump oo kasoo horjeestay.
Joe Biden oo qarka usaaran in uu noqdo madaxweynaha Mareykanka iyo Trump oo diiddan.